Sawirro: Xisbiga uu Guddoomiyaha ka yahay Xasan Shiikh oo Maanta lagu dhawaaqaayo – Banaadir Times
By banaadir 4th October 2018 176 No comment
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu daah furaayay Xisbiga ugu weyn ee Mucaaradka ay ku mideysanyihiin kaasi oo loogu magac daray Midowga Nabadda iyo Horumarka (UPD).
Munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa lagu caleemo saaraya guddoomiyaha xisbiga oo loo doortay madaxweynihii hore ee dalka mudane xasan shiikh maxamuud.
Xisbigaan ayaa waxaa ku midoobay dhowr axsaab waxaana uu noqonaya kan ugu weyn oo mucaaradku ku mideysanyihiin.
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka iyo Senataro ka tirsan Aqalka Sare ayaa ka dhex muuqda munaasabadda daah furka Xisbiga, waxaa goor dhow hoolka gaaray Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Guddoomiyaha KMG ee Xisbiga.
Xisbiga Talada dalka Haya ee Nabad iyo Nolol ayaa isna la filaya in goordhaw lagu dhawaaqo waxaana xisbigaasi ku jira mas’uuliyiinta ugu sarreysa dalka oo ay ugu horreeyaan madaxweyne Farmaajo iyo Ra’isul wasaare Kheyre.
Ciidanka Ilaalada Gaarka Ee Deni Oo Hubeysan Oo Soo Gaaray Muqdisho
By banaadir 31st August 2018